मंगल ग्रह: तपाईलाई थाहा पाउनु पर्ने सबै | नेटवर्क मौसम विज्ञान
हाम्रो सौर्यमण्डलमा रहेको कुनै ग्रहको लागि मानवको खास ध्यान हुन्छ। त्यो ग्रह मंगल हो। यसलाई यसको रंगको लागि रातो ग्रह भनिन्छ। टेलिस्कोप मार्फत अवलोकन गरिएको यो पहिलो ग्रहहरू मध्ये एक हो र १ th औं शताब्दीको मध्यदेखि यसले बाह्य जीवनको सम्भावित अस्तित्वको बारेमा अनुमान गर्न थाल्छ। धेरै वैज्ञानिकहरूले सभ्यताको लागि उपयोगी पानी बोक्नका लागि डिजाइन गरिएका च्यानलहरूको अस्तित्व वर्णन गरे।
म Mars्गलबार एक धेरै शोध गरिएको ग्रह हो र जसको बारेमा त्यहाँ अधिक जानकारी छ। के तपाईं मंगल ग्रहको बारेमा सबै कुरा जान्न चाहानुहुन्छ? यस पोष्टमा हामी यसलाई पूर्ण विश्लेषण गर्नेछौं। पढिरहनुहोस् र तपाइँ सबै कुरा पत्ता लगाउनुहुनेछ 🙂
1 मंगल सुविधाहरू
3 मंगल ग्रहको वातावरण
मंगल ग्रह सौर प्रणालीको चार चट्टानी ग्रहको हो। यो हाम्रो ग्रहमा समान छ सम्भवतः मंगल ग्रहको जीवन को विश्वास लाई धेरै प्रभावित छ। ग्रहको सतहमा विभिन्न स्थायी संरचनाहरू र पोलर क्यापहरू छन् जुन वास्तवमा वास्तविक बरफले बनेको हुँदैन। यो शीतको तहले बनेको हुन्छ जुन सायद सुख्खा बरफले बनेको हुन्छ।
यो हाम्रो सौर्यमण्डलको सब भन्दा सानो ग्रह हो र यसमा दुई उपग्रहहरू छन्: फोबोस र डेमोस। म Mars्गल the. अन्तरिक्ष यानले मंगलबारको यात्रा गरेको थियो। यसमा हल्का र अँध्यारो दागहरू देखिएका थिए, त्यसैले वैज्ञानिकहरूले सतहमा पानीको उपस्थिति अनुमान गरे। वर्तमानमा यो पृथ्वीमा करिब43,5 लाख वर्ष पहिले ठूलो बाढी आएको ठानेका छन। केही वर्ष अघि २०१ 2015 मा नासाले तरल नुनिलो पानीको अस्तित्वको प्रमाण पुष्टि गर्‍यो।
केवल ग्रह पारा यो मंगल ग्रह भन्दा सानो छ। घुमावको अक्षको झुकावको कारण, यसले पृथ्वी जस्तै मौसम experiencesतुहरू पनि अनुभव गर्दछ र जुन यसको अर्धवृत्ताकार कक्षाको कारण अवधिमा फरक हुन्छ। दुबै उपग्रह १ 1877 मा पत्ता लगाइयो र यसको कुनै घण्टी छैन।
यसको अनुवाद सूर्यको वरिपरि पृथ्वीमा equivalent 687 बराबर दिनहरू लिन्छन्। यसको साइड्रियल रोटेशन अवधि १,०२1.026 पृथ्वी दिन वा २,,24.623२XNUMX घण्टा हो, जुन पृथ्वीको परिक्रमण अवधि भन्दा अलि लामो छ। यसप्रकार, एउटा मंगल ग्रह पृथ्वी दिन भन्दा आधा घण्टा लामो हुन्छ।
व्यास छ 6792 6.4169 1023 २ किलोमिटर, यसको जनसंख्या .3.934..3१XNUMX x x १०२XNUMX केजी र घनत्व XNUMX XNUMX g g / सेमी।। यो १.1.63116१1011 X १०११ किमी3को मात्रामा ओगट्छ। यो चट्टानी ग्रह हो बाँकी बताउने ग्रहहरू जस्तो। स्थलीय सतहले अन्य आकाशीय पिण्डहरूका बिरूद्ध प्रभावको छाप प्रस्तुत गर्दछ। ज्वालामुखी र यसको पृथ्वीको क्रस्टको चालहरू यसको वातावरणसँग जोडिएको घटना हो (धुलो आँधी जस्ता)। यी सबै घटनाहरू सतह परिवर्तन र परिमार्जन गरिएको छ।
रातो ग्रहको उपनामको एकदम सरल स्पष्टीकरण छ। मंगल ग्रहको माटोमा फलाम खनिजहरूको ठूलो मात्रा हुन्छ जुन अक्सिडाइज हुन्छ र रातो रंग दिन्छ जुन पृथ्वीबाट सजिलै छुट्याइएको छ। मंगल ग्रहको तीक्ष्ण दागहरूले परिभ्रमण कालको अवलोकन र गणनालाई ठूलो सुविधा पुर्‍यायो।
यसको टेक्टोनिक्सको ठाडो स्थान छ। त्यहाँ ध्रुवीय बरफ टोपी, ज्वालामुखी, उपत्यका र मरुभूमि छन्। थप रूपमा, आँधीबेहरीले सार्ने धुलोले भरिएका क्रेटरहरूले भोगेको कटावको सबूत पत्ता लागेको छ। ती विस्तार र कडा तापमान परिवर्तनको कारण संकुचन द्वारा विकृत छन्। यो माउन्ट ओलम्पसको घर हो, सौर प्रणालीको ग्रहमा सबैभन्दा ठूलो ज्वालामुखी, साथै भेल्स मारिनरिस, न्यु योर्क र लस एन्जलस (संयुक्त राज्य अमेरिका) बीचको दूरी बराबरको लम्बाइको साथ, मान्छेले देखेको सबैभन्दा ठूलो र सब भन्दा भव्य क्यानियनहरू मध्ये एक।
मंगल ग्रहको वातावरण
अर्कोतर्फ, हामी वातावरण राम्ररी जाँच्दैछौं। हामी एक बरु राम्रो र वश वातावरण पाउन। यो कार्बन डाइअक्साइड, नाइट्रोजन र अर्गोन मिलेर बनेको छ। अधिक सटीकताका लागि, वातावरण मिलेर बनेको छ %%% CO96, २% आर्गन, २% नाइट्रोजन र १% अन्य तत्वहरू। तपाईमले देख्न सक्नुहुने रूपमा, मंगल ग्रहको वातावरणमा त्यहाँ कुनै अक्सिजन छैन, त्यसैले जीवन अस्तित्वमा हुन सक्दैन जुन हामीलाई थाहा छ।
मंगल ग्रहको आकार पृथ्वीको आधा जति हुन्छ। पहिलो अन्तरिक्ष यान जसको मिशन सफल थियो मरीन called (पहिले उल्लेख गरिएको) भनियो। तपाइँलाई हाम्रो ग्रहबाट मंगल ग्रह प्राप्त गर्न लाग्ने समयको कल्पना दिन, २२२ मिलियन किलोमिटरको दूरी छ।
यहाँ यस ग्रह र हाम्रो बारेमा केहि चाखलाग्दो तथ्यहरूको समुहबद्ध गरिएको छ।
हामीसँग पृथ्वीमा मंगलबारको सब भन्दा नजिकको चीज अन्टार्कटिका हो। यो एकमात्र अद्भुत ठाउँ हो जहाँ तपाईं प्रशस्त बरफको साथ मरुभूमि क्षेत्रहरू फेला पार्न सक्नुहुनेछ।
हामीलाई थाहा छ कि रातो ग्रह र हाम्रो दुबै ब्रह्माण्डिक झटकेहरूको शृंखलाबाट उत्पन्न भएको हो। अरबौं वर्ष पहिले विशाल एस्टेरोइड द्वारा आकार। यी टुक्राहरू अन्य ग्रहहरूको गुरुत्वाकर्षण शक्तिहरूद्वारा निर्देशित लाखौं बर्षदेखि सम्पूर्ण सौर्यमण्डलको परिक्रमा गरिसकेका छन्। पृथ्वीको अन्त्यमा उनीहरू कसरी यस्तै भयो।
रातो ग्रहमा पृथ्वीको भन्दा कम गुरुत्वाकर्षण छ। यो डाटा उत्सुक छ, तर एकदम स्पष्ट छ, किनकि यसको वजन धेरै कम छ। हाम्रो ग्रहमा भन्दा %२% कम गुरुत्वाकर्षण छ। पृथ्वीमा १०० किलोग्राम तौलको व्यक्ति त्यहाँ 100० किलोग्राम तौलको हुनेछ।
मंगलमा पृथ्वी जस्तै justतुहरू छन्। यहाँ जस्तो देखिन्छ, वसन्त, ग्रीष्म ,तु, शरद र जाडो चार मौसमहरू जुन रातो ग्रहमा छ। हामीले हेर्ने बानीमा भएका चीजहरूको सम्बन्धमा फरक प्रत्येक seasonतुको अवधि हो। उत्तरी गोलार्धमा, मंगल ग्रहको वसन्त4महिना र गर्मी7सम्म रहन्छ, तर गिरावट र जाडो सानो समय अवधिमा फरक हुन्छ।
त्यहाँ भएको छ म on्गलमा मौसम परिवर्तन जसरी पृथ्वीमा भएको छ।
तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ, यो ग्रह वैज्ञानिक समुदायले यो विश्वास गरे कि यो एक्स्ट्रास्टेरियलटियल लाइफ होस्ट गर्न सक्छ र यो ग्रह पलाउन सम्भव सम्भावित ग्रहको रूपमा यदि हाम्रो ग्रह सीमा पुग्छ भने सबैभन्दा अध्ययन गरिएको हो। र तपाइँ, के तपाइँ जीवनलाई मंगल ग्रहमा फेला पार्नुहुनेछ भन्ने सोच्नुहुन्छ?
लेखको पूर्ण मार्ग: नेटवर्क मौसम विज्ञान » खगोल विज्ञान » मंगल